Okwu Mmalite nke Companylọ Ọrụ - Nongchuanggang E-commerce Industrial Park (Weifang) Co. Ltd.
Nongchuanggang E-commerce Industrial Park (Weifang) Co. Ltd bụ mbupụ na ahia mba ofesi e-azụmahịa n'elu ikpo okwu jikọrọ aka ike guzosie ike site Anqiu Agricultural Development Group, ndị obodo na-ekesịpde isi obodo n'elu ikpo okwu nke China Rural Innovation Port Co., Ltd. The ụlọ ọrụ dị na qilọ Anqiu Nonggu, akụkụ ndịda ọdịda anyanwụ nke obodo ahụ. Dabere na Anqiu nwere ngwaahịa ugbo, dị ka scallions na ginger. N'ihe kariri 33,000 nke ginger, gburugburu 50,000 arces of scallions dị ka nnukwu uru ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ ahụ na-agba mbọ ịmepụta ụlọ ọrụ e-commerce ọkachamara nke ngwaahịa mbupụ, ọganihu n'ihu nke ọmụmụ ụlọ ọrụ ugbo dijitalụ na China, mmepe mmepe. na cross-ókè-ala e-azụmahịa mmepe, aiming na-akwalite China dijitalụ ugbo na ika na mmepe nke ọhụrụ formats dị ka cross-ókè-ala e-azụmahịa mode, na-emepe emepe ọhụrụ mba ahia nlereanya.
Chịkọta ndị ọkachamara niile, ego, ozi na teknụzụ, agụmakwụkwọ na ihe atụ akụ na ụba ndị ọzọ nke oge a, maka "ndagwurugwu ugbo" China agụmakwụkwọ na usoro ihe eji eme ihe, iji Big Data, Cloud Computing, Chain Blocks, dị ka Ntanetị nke Teknụzụ njikọta nke akụrụngwa. , iwulite ngwakọta nke ego, nyocha sayensị, azụmaahịa, ụlọ ọrụ, ọrụ ugbo, ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ, njikọta nke usoro mmepe ọhụụ nke azụmahịa e-cross-border, na-achọ inye aka ịbawanye ego ndị ọrụ ugbo, na-enyere azụmaahịa mpaghara aka ịzụlite, kọọ Anqiu mmepe ugbo ohuru nke uto aku na uba, wulite Shandong Weifang oche di elu nke di elu ruo mba ebuputara. Ọ ga - enye aka na uto nke azụmaahịa mba ụwa na mmepe akụ na ụba ụwa, ma wulite ntọala siri ike maka iwuli windo ọhụrụ maka mmeghe na mmepe nke China na ebe etiti maka mmekọrịta mba ụwa.